Isotonic isiselo- iThermomix Recipes | ThermoRecipes
KuselaImizuzu ye14 abantu
Nasiphi na isingxengxezo kulungile ukuba uphumle nesiselo esenziwe ekhaya se-isotonic. Ngokukodwa emva kwe- iseshoni yezemidlalo okanye usuku olupheleleyo lomsebenzi.
Ndikhumbula ngenye imini xa umyeni wam nentombi yakhe endala babehambe ibhayisekile iyure yonke. Ukufika kwabo, intombi yam yandibuza kuqala i-Aquarius® kwaye woyikeka kangakanani! iphelile. Ndiyikhumbule le kwaye emzuzwini ndalungisa ngezithako ezimbalwa kwaye ngendlela elula.
Les thande kakhulu kwaye, ukusukela ngoko, sele ndiyisebenzisile izihlandlo ezininzi ukusela emva kokhuphiswano lokuqubha okanye usuku lokungayeki. Sithanda ukuyithatha njengokulala esofeni kunye nokutya imivalo yamandla… Kufuneka uphinde ufumane amandla! 😉
1 Isotonic isiselo
Isiselo esimnandi esivuselelayo ukuze uphinde uphinde usebenze nzima.
Uhlobo lweRipeipe: utywala
Ixesha lokupheka: 1M
Ixesha elipheleleyo: 1M
I-2 yeminqathe, exutywe kunye nepheleleyo
Iilamuni ezi-3 eziphakathi
800 g yamanzi
Siqala iThermomix®, ngesantya 6. Yongeza iminqathe kwisitya kwaye ubayeke badibanise imizuzwana embalwa, bade bacoleke ngokupheleleyo.
Yongeza iilamuni ezihlanjiweyo, ezingacocwanga kunye nezineekota, iswekile kunye namanzi. Siyacinezela Amaxesha ama-5 okanye ama-6 amaqhosha eTurbo aneempawu ezomileyo.
Ukuxinana ngesisefo esenziwe ngesingxobo esifanelekileyo kwi-pitcher enomkhenkce.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Iibhari zokutya
Umthombo-Incwadi Iindlela zokupheka zabasasazi bethu.
Lungisa le recipe kwimodeli yakho yeThermomix®
Fumanisa ezinye iiresiphi ze: Iziselo kunye neencindi, Elula, Ngaphantsi kwemizuzu eli-15, Iiresiphi zaBantwana
Umendo opheleleyo kwinqaku: Thermorecetas » Thermomix zokupheka » Iziselo kunye neencindi » Isotonic isiselo
Sisityebi kangakanani! Ndizamile kwiklasi ekhethekileyo ye-thermomix kwaye ndiyayithanda, kodwa andikaze ndiyilungiselele. Ngokuchanekileyo ndinayo naloo ncwadi.
Elena Calderon sitsho
Imnandi, Piluka! Yiba nesibindi sokwenza oko. Ukwanga.
Phendula ku-Elena Calderón
iimoto zemoto sitsho
Ndilungiselela le nto imnandi kakhulu ebantwaneni bam xa beza kuqeqeshela ukukhwela ibhayisikile, ubonile ukubanda kwe-strawberries oku-speedcuchara.com, yi-buinisimoooooooo. Kufuneka uthathe ithuba ngoku kuba kukho amaqunube. NDIBULISA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Phendula abantu abenza imali
Molo Mari Carmen, ndiyayithanda ingqele ebandayo, ndiyibonile kwaye ndicinga ukuba ndiza kuyenza kwezi ntsuku. Konke okugqibelele.
Mholo! Uxolo, kodwa andisiqondi ukuba kutheni kufuneka ufake ibhasikidi kwiglasi ukuba sele sikhupha ulwelo kwi-thermomix ukuya kwijagi. Enkosi. Ndiyithanda kakhulu ibhlog yakho, ndijonga yonke imihla.
Molo Conchi, ukuba ube nezihluzi ezibini; Oko kukuthi, iintsalela zihlala ngaphakathi kwiglasi ngebhasikidi kwaye isihluzo sisebenza njengesihluzi sokugqibela ukuze kungabikho nto iwayo. Ndiyabulisa kwaye ndonwabile ukuba uyayithanda ibhlog yethu.
isandra iglesias sitsho
Ndizakuzama ukwenza iimbatyisi kuba unyana wam uhlala enesi siselo xa egqiba ibhola ndiyabulela ………………… ..
Phendula u-sandra iglesias
Uza kubona indlela emnandi ngayo, uSandra. Ndiyanqwena uyayithanda.
UAna Martin sitsho
Molo uElena, ukusukela ngoDisemba ndine-thermomix (isipho esothusayo esivela kumyeni wam) kwaye ndonwabile. Yonke imihla ndijonga ibhlog yakho kwaye iluncedo olukhulu kum. Ndinokuthandabuza okuncinci, kuba umyeni wam unesifo seswekile. Ndiza kulungisa esi siselo se-isotonic, kodwa ungandicebisa ukuba lingakanani inani le-saccharin endinokuthi ndibeke, endaweni yeswekile, apha nakwezinye iresiphi. Enkosi ngokuvuyisana nomzamo wakho
Phendula Ana Martín
Molo uAna, eyona nto intle kukuba ujonge ibhokisi yeswidi. Kuzo zonke kuza ukulingana kwe-saccharin kunye noshukela. Uhlobo ngalunye lwahlukile kwaye kungcono ukuba ulandele imiyalelo yabo. Ndiyabulisa kwaye ndiyabulela kakhulu ngokusibona. Ndiyavuya uyayithanda ibhlog yethu!
Molweni mantombazana, inyani sisiselo esinempilo kwaye ngoku ukuqala kobushushu, ufuna okungakumbi. Ndiqhele ukuyenza ekhaya rhoqo, kodwa kungekuphela njengesiselo semidlalo, kodwa njengesincedisi sokutya endaweni yeziselo eziqhelekileyo. Sonke siyayithanda, ndingumntu onesifo seswekile kwaye ndongeza iswiti, kodwa iphuma nje sisityebi .Konke okona kulungileyo.
Ndonwabile ukuba uyayithanda, Nuria!. Inyani yile yokuba sisiselo esifanelekileyo kuwo nawuphi na umzuzu. Konke okugqibelele.
carai, yayingazange ifike kum !!
Unyana wam udlala iHokei kwaye kwimidlalo endisoloko ndimthengela olu hlobo lwesiselo, ngoku ndiza kuyenzela yena.
Ndiyathemba uyayithanda, Pepi, uza kundixelela.
Molo Elena, ndingathanda ukuyenza, ihlala ixesha elingakanani efrijini? enkosi imibuliso
Molo uAlicia, ewe inyani kukuba siyigqibe ngosuku olunye, kodwa ndiyakholelwa ukuba iintsuku ezintathu zihlala zifezekile. Kungcono ukuyidla njengoko usenza ukuze ungalahleki iivithamini. Ndiyathemba uyayithanda, uya kundixelela.
Khange ndiyicinge into yokuba ineekherothi kunye neelamuni, ngokuqinisekileyo zingcono kakhulu kune-aquarium yasekuqaleni !!
Ndinombuzo kodwa awukho malunga neresiphi; Ndingathanda ukwazi ukuba ubhala njani malunga nefoto, uyenza ngaliphi inkqubo? Enkosi kakhulu 😀
Molo Meliade, zininzi iinkqubo kodwa ndisebenzisa iPhotohop okanye iPiknic.
Molweni zihlobo ndineminyaka engama-37 ubudala kwaye ndihlala ndiziqhelanisa nokubaleka kakhulu, ndide ndibhalisele nokwenza imidyarho ethandwayo, ndingathanda ukuba nibeke ezinye iziselo ze-isotonic kuba ndine-thermomix okanye iiresiphi ezinamandla amaninzi okuziqeqesha kakuhle kwaye ngamandla, enkosi ndizakuqhubeka ukubhala ngaphezulu
Molo u-Antonio, ndilinde ukwenza iresiphi yesiselo sezemidlalo. Ndiyathemba ukuba isityebi, ukuba kunjalo ndiza kubeka iresiphi. Enkosi kakhulu ngengcebiso yakho, licebo elilungileyo. Konke okugqibelele.
Molweni, ndiyavuyisana kwaye ndiyabulela ngokusinika izimvo ezininzi ezilungileyo, ndiyalithanda iphepha lakho kwaye ndijonga mihla le. Ndifuna ukwazi ukuba kutheni isiselo samandla ngosuku olulandelayo sinobukrakra, singenziwanga ngokutsha. Enkosi
Molo Rosi, kufana naxa usenza ijusi yeorenji kusuku olulandelayo iba krakra, ikwayilento iselwayo ineelemon Kukuyithatha emini. Ndiyabulisa kwaye ndiyavuya uyayithanda ibhlog yethu. Enkosi kakhulu ngokusibukela!
mmmm k ricaa! I-voi acer x 2º ixesha kunye ne-xro ndinamathandabuzo njengokuba ikwahlula-hlula iilamuni ngekota? enkosi muxas
Molo uStefa, kuya kufuneka uwahlule ube ziinxalenye ezi-4. Konke okugqibelele.
Incredible, enye iresiphi eluncedo kakhulu, ndiyavuyisana nawe kwibhlog yakho.
Enkosi kakhulu Yesu!
Ndiyenzile nje kwaye ibe yimpumelelo endlwini yam! Ndenze kuphela utshintsho oluncinci, njengeValencian elungileyo ... ndongeze iorenji kwaye le ivela kwimiboniso bhanyabhanya! Hayi! kwaye nam nayo yonke into ilahlekile nge-turbo! haha! Kufuneka ibe yinto eqhelekileyo kuba umatshini ebephezulu…. hehe
Molo Carmen, ndiyavuya uyithandile! Inyani yile yokuba nge-turbo iyaphaza kancinci, kodwa kufanelekile. Kulunge kakhulu ukongeza iorenji. Konke okugqibelele.
Sawubona u-Elena, uxolo ngenxa yokungakwazi ukukuphendula ngaphambili, ndingavuya xa unokubeka ezinye iiresiphi zolu hlobo lweziselo ze-isotonic kuba ukumiswa kwe-thermomix kulihlazo okanye ndingathanda ukuba ubeke iresiphi yeprotein eyenziwe ekhaya Shukuma, enkosi ngombuliso ka-Elena
Molo u-Antonio, siya kuzama ukubeka ezinye iiresiphi zolu hlobo. Konke okugqibelele.
Molo, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo Ndifumene ibhlog yakho kwaye ndiyakudumisa kakhulu ngokusinika inxenye yamava akho ukuze sonwabe. Ekhaya kule mpelaveki sibambe oko oogqirha bakubiza ngokuba "ziintsholongwane" kwaye ukusukela oko umzimba wawungafuni enye into ndakhumbula "eso siselo sokuqubha" (kuba abantwana bam abatyi kodwa ezemidlalo zabo aziphumli kwaye uyabona! Amandla apho Kodwa ibiyimpumelelo ebisazi kancinci kancinci kwaye kuye kwafuneka ndenze omnye umjikelo.Ndibulela kakhulu ... kwaye uqhubeke ngoluhlobo ...
Ndiyabulela kakhulu Ana! Ndonwabile ukuba uyithandile kwaye ndiyathemba ukuba olo tyelelo lungalindelekanga, intsholongwane, sele ilushiyile umzi wakho. Konke okugqibelele.
Ndingumdlali weqonga rhoqo kwaye isiselo siphumelele. Ndiyakuvuyela
Enkosi kakhulu Pedro!
Molo Elena, ndingathanda undixelele iresiphi yesiselo ukuze undenze ube brunette, enkosi
UIrene Arcas sitsho
Kufuneka usebenzise iminqathe ukwenza umdaka. Ke ndikushiyela lo mbono kwaye undixelele unjani?
I-100 gr yamanzi
5 iityhubhu zomkhenkce
I-50 gr yeswekile
Siyaxobuka iminqathe kunye neorenji, sizongeza kwiglasi kunye netumato, ngaphandle kokuxobuka. Songeza amanzi kunye neswekile. Isantya sesi-5 kwimizuzwana emi-5 kwaye siqhubeka sinyuka sisiya kwi-10. Sishiya ngamandla apheleleyo imizuzu emibini.
Sidibanisa umkhenkce, siphakamisa ivel. ngo-5, imizuzwana emihlanu ukwahlulahlula-hlula kwaye uqhubeke uye kwi-10, imizuzwana embalwa.
Uya kubona ukuba mnandi kanjani!
Phendula uIrene Arcas
TERESA inkcazo yegama lokuqala sitsho
Kukhulu, ndiqaphele ukuba yenziwa njani, unyana wam yimbaleki kwaye siza kuyenza, ndiza kukuxelela ngayo, ndiyithengile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye nenkwenkwe, nonyana wam uyothuka, uthi yenye yezona zinto zilungileyo endizithengileyo ukubingelela kwaye ndijoyina iqela, enkosi.
UAscen Jiménez sitsho
Wamkelekile !!… uzakubona ukuba ukusuka apha ukuya entweni awukwazi ukucinga ikhitshi lakho ngaphandle kwalo.
Ndiyathemba ukuba uyasithanda esi siselo. Hayi! Enkosi ngengcaciso yakho.
Phendula Ascen Jiménez
Ilayisi kunye ne-zucchini kunye ne-mint
Isuphu yerayisi ene squid kunye ne prawns